हिजो घटेको सुनको मूल्य आज कति ? हेर्नुहोस् सुनको भाउ
काठमाडौँ । साताको पाँचौ दिन अर्थात बिहीबार सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रति...
आज पनि सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, हेर्नुहोस् कति छ भाउ ?
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च...
फागुन १०, २०७६, शनिबार
भारत । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित सोनभद्रको सोन पहाडी र हरदी इलाकामा सुन खानी भेटिएको छ। स्थानीय प्रशासनले सुन खानी भेटिएको पुष्टि गरेपछि त्यहाँका स्थानीय निकै खुसी छन्। उत्तर प्रदेश सरकारले सोनभद्...
काठमाडौँ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७७ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च म...
चीन । चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव सुन बजारमा पनि परेको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै जाँदा अन्य आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएसँगै विश्वका लगानीकर्ता सुन बजारमा आकर्षित भएकाले सुनक...
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, हेर्नुहोस् कति छ आज सुनको भाउ ?
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य ...
काठमाडौँ । आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७५ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो पनि छापावाल सुन यही मू...
बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ...
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज (सोमबार) पनि सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ...
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज (आइतबार) पनि सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ७५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतित...
घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । आज (बुधबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला ७४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ...
काठमाडौँ । आज (सोमबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला ७५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो पनि छापावाल सुन यही मूल्यमा ...
काठमाडौँ । आज (आइतबार) पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला ७५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ७...
आज पनि सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । साताको दोस्रो दिन अर्थात सोमबार पनि सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ५ सयले बढेर ७६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जना...
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला १ हजारले बढेर प्रतितोला ७५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी म...
गहना किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कति छ आज सुनको मूल्य ?
पुस १७, २०७६, बिहिबार
काठमाडौँ । आज (बुधबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर छ। आज छापावाला सुन प्रतितोला ७३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो पनि छापावाल सुन यही मू...
सुनिल हरिरामको मलद्वारमा आधाकिलो सुन
काठमाडौँ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। भारतको महाराष्ट्रस्थित ठाणे भन्ने स्थानका सुनिल हरिरामलाई प्रहरीले आज बिहान सुनसहित पक्राउ गरेको हो। मंगलबार बिहान साढे ...
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा एक वर्षमा करिब १३ हजार आठ सय रुपियाँले मूल्य वृद्धि भएको छ। सोमबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७३ हजार तीन सय रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै, ...
प्रधानमन्त्रीलाई गगनले सोधे, जनताको चिन्ता तपाईंका लागि आधारहीन र प्रायोजित आरोप मात्र हुन् ?